Saxaatoo filatame sirreessa ykn safara. Akkasumas hammamta saxaatoo bakka isaatti deebisuu dandeessa.
Saxaatoo filatame sirreessuf ykn safaruuf, ykn iddoo adii naannoo saxaatootti dabluuf bal'ina kana fayyadami.
Yeroo sooftu safara hammmamtaa saxaatoo xabboo argamsiisa, kunis hammamtaa saxaatoo qofa jijjiira.
Hammataa calaqqee eegi
Yeroo sooftu hammamtaa saxaatoo xabboo argamsiisa, safarri saxaatoo qofti akka jijjiiramu. Safara saxaatoo hir'isuuf, dirqaala kana filiiti gatiiwwan negaativii sanduuqa sanduuqawwan soofuu keessatti galchi. Safara saxaatoo guddisuuf, gatiiwwan pozaiivii sanduuqawwan soofuu keessatti galchi.
Dirqaalli Safara Eegi yoo filatame, qarree bitaa saxaatoo sirreessuf hanga pozatiivii galchi ykn iddoo duuwwaa adii gara bitaa saxaatootti dabaluuf hanga negaatiivi galchi. Dirqaalli Hammamtaa calaqqee eegi yoo filatame, hanaga pozatiivi safara surdaala saxaatoo guddisuuf ykn safara surdaala saxaatoo xiqqeessuf hanga negaatiivi galchi.
Dirqaalli Safara eegin yoo filatame, gubbaa saxaatoo sirreessuf hanga pozaatiivi galchi ykn iddoo adii saxaatoo gubbaatti dabaluuf hanga negaatiivi galchi. Yoo dirqaalli Hammamtaa calaqqee eegin filatame, surdaala saxaatoo guddisuuf hanga pozaativii ykn safara surdaala saxaatoo xiqqeessuf hanga negaatiivi galchi.
Dirqaalli Safara Eegi yoo filatame, irra saxaatoo sirreessuf hanga pozatiivii galchi ykn iddoo duuwwaa adii saxaatoo gubbaatti dabaluuf hanga negaatiivi galchi. Yoo dirqaalli Hammamtaa calaqqee eegin filatame, safara sarjaa saxaatoo guddisuuf hanga poozatiivi ykn safara sarjaa saxaatoo xiqqeessuf hanga negaatiivi galchi.
Dirqaalli Safara Eegi yoo filatame, jala saxaatoo sirreessuf hanga pozatiivii galchi ykn iddoo duuwwaa adii saxaatoon gaditti dabaluuf hanga negaatiivi galchi. Yoo dirqaalli Hammamtaa calaqqee eegin filatame, safara sarjaa saxaatoo guddisuuf hanga poozatiivi ykn safara sarjaa saxaatoo xiqqeessuf hanga negaatiivi galchi.
safaraa saxaatoo filatamee jijjiira.
Yabbina saxaatoo filatamee akka dhibbeentaatti galchi.
Hojjaa saxaatoo filatamee akka dhibbeentaatti galchi.
Hammamtaa calaqqee filatamee jijjiira.
Saxaatoo filatameef yabbina galchi.
Saxaatoo filatameef hojjaa galchi.
Saxaatoo filatame gara hammamtaa xabboo isaatti deebisa.
Title is: Soofuu